Kala duwan oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone (Bogga 4)
Apple wuxuu noqon doonaa mid aad u adag mana ogolaan doono in Apple Card lagu isticmaalo aaladaha ay ku xirantahay Jailbreak ama shirkadaha aan rasmiga ahayn.
Suuqyada Apple ayaa loo kordhiyay xirmooyinka xaqiiqda ee LEGO: Dhinac Qarsoon. Adeegso barnaamij xaqiiqo ah oo la kordhiyay si aad ula fal gasho iPhone iyo iPad.
Tim Cook wuxuu saxeexay Xbox-aasaasaha iyo injineerkii hore ee Valve (Half-life, Counter-Strike) oo loogu talagalay madal cusub oo khaas ah oo lagu ciyaaro Apple Arcade
Ragga ka socda Cupertino mar dambe ma oggola inay saxeexaan noocyadii hore ee iOS 12.4 iyada oo loo marayo server-kooda, markaa waxaan kaliya rakibi karnaa iOS 12.4
Hadda waxaad shaqaalayn kartaa Movistar TV adigoon noqon macmiil Telefónica ah.
Telefónica ayaa bilo ka hor noogu dhawaaqday barnaamijkeeda Movistar + Lite ee fiidiyowga ah hadana waa run. Rafaa Isbaanish ...
Shaashadaha iPhone XI ee soo socda waxay ka imaan doonaan Samsung iyo LG sannadkan, iyagoo ballaadhin doona sannadka dambe shirkadda Shiinaha ee soosaara BOE.
Sida laga soo xigtay Kuo, saddexda iphone ee soo bixi doona 2020 waxay la jaan qaadayaan 5G
Sida laga soo xigtay Kuo, saddexda nooc ee iPhone-ka ah ee suuqa soo gali doona sannadka 2020 waxay la jaan qaadi doonaan teknolojiyadda 5G.
Apple waxay dooneysaa inay ku darsato moodeheeda 5G aaladda qaar markay tahay 2021
Apple waxay dooneysaa inay bilawdo soo saarida modemkeeda 5G oo ay ku sii kordhiso qalabkeeda sanadka 2021
"Raadka xumaanta", oo ah sheeko-baare dambi-baaris ah oo lagu duugay qoditaankii 'Atapuerca' halkaas oo ay ku ogaanayaan cidda uu gacan-ku-dhiiglaha ku mahadsan yahay iPhone X
Waxaan falanqeyneynaa cusub ee 'GoGo USB-C Hub' ee ka socda Twelve South, oo ah xalka ugu fiican ee loo yaqaan 'desktop' ama loo adeegsan karo wareejinta oo ku dhufanaysa 8 dekeddaha iPad Pro.
Apple waxay xaqiijineysaa inay soo iibsaneyso qaybta 'modem smartphone' ee Intel, shatiyadeeda iyo shaqaalaheeda, ilaa $ 1000 bilyan.
Waxaan dib u eegnay Apple-ga cusub ee Apple ee Beats-ku calaamadeysan dhagaha dhagaha ee aan lahayn. Is-maamul aan la dhaafin karin, aad u raaxo badan oo leh tayo cod aad u wanaagsan.
LG waxay ka hirgalin doontaa AirPlay 2 iyo HomeKit telefishinnadooda usbuuca soo socda
Shirkadda Kuuriyada Koofureed waxay u diyaar garoobi doontaa bilaabista rasmiga ah ee AirPlay 2 iyo HomeKit moodooyinka qaar ee telefishannadooda.
Xanta maalmaha ugu dambeeya waxaan ku soo koobeynaa sheekooyinka ugu waaweyn ee seddexda nooc ee iPhone 11 ee Apple soo bandhigi doono deyrtaan yeelan doonaan.
Pegasus waxay sheegaysaa inay marin u heli karto iCloud, FaceBook, Microsoft iyo adeegyo kale
Mar labaad, khayaanada Pegasus waxay ku kacdaa ficil waxayna sheeganeysaa inay gasho iCloud, Facebook, Microsoft, koontooyinka Google, iwm.
Kani waa iPadOS Multitasking cusub
iPadOS waxay noo keentaa horumarro badan oo xagga howlaha badan ah oo noo oggolaanaya inaan marinno dhowr codsi isla mar, isla markaana si dhakhso leh u jiidno walxaha ama barnaamijyada furan.
Xanta cusub ee ku saabsan astaanta beddelka aaladaha Apple waxay muujineysaa in qaanso roobaadka uu ku dhow yahay inuu soo laabto, ma rumaysan tahay?
Falanqeeyayaasha cusubi waxay xaqiijinayaan in sanad gudihiis ay jiri doonaan iPhoen bilaa xog ah oo markale yeelan doona Aqoonsiga Taabashada oo ah nidaam aqoonsi
Apple waxay laba jibaartay mudada tijaabada ee Apple Music ee ardayda, iyadoo laga bilaabayo bixinta 3 ilaa 6 bilood gebi ahaanba bilaash.
Nintendo wuxuu bilaabayaa ciyaartiisa quraafaadka ah ee Dr. Mario World ee loo yaqaan IOS
Nintendo wuxuu bilaabayaa ciyaarta loogu talagalay macruufka Dr. Mario World maalin ka hor jadwalka, qaybta aan ku ciyaari doono dilka bakteeriyada iyadoo la kaashanayo Mario Bros.
Samsung, sida Apple, waa mid kale oo ka mid ah kuwa ay saameeyeen hoos u dhaca iibka taleefannada casriga ah ee adduunka.
Ururka Macaamiisha Ustaraaliya ayaa ku eedeeyay Samsung inay marin habaabin ku sameysay xayeysiisyadeeda ku saabsan iska caabbinta biyaha ee la sheegayo in ay ka jiraan ebuteladeeda
Doorashooyinka nacaladda leh waxaa loogu talagalay inay naga dhigaan inaan ka fikirno wax yar, laakiin waa lagama maarmaan in la ogaado fikradda guud ee ...
Apple wuxuu ku darayaa sixitaanka muuqaalkeena FaceTime ee iOS 13
Apple wuxuu ku darayaa ikhtiyaar cusub iOS 13 kaas oo saxaya aragtidayada inta lagu jiro wicitaanada FaceTime si aan u eegno qofka kale.
Xanta cusub ayaa sheegaya in Apple ay bilaabi karto iPhone cusub oo leh Touch ID oo ku xaddidan suuqa Shiinaha si loo yareeyo kharashka
Jonathan Ive, oo ah naqshadeeyaha caanka ah ee reer ingiriiska soddon sano ku dhowaad ka shaqeynayay shirkadda Apple ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay shaqada ...
Muxuu Jony Ive uga tagayaa Apple? Nabad gelyo bilaabatay afar sano ka hor
Jony Ive wuxuu ku dhawaaqay inuu ka tagayo Apple si uu shaqo uga bilaabo shirkaddiisa naqshadeynta, go'aanka soo baxayay muddo afar sano ah
Imtixaanadii ugu horreeyay ee dhabta ah ee lagu wadaago xaaladda u dhexeysa WhatsApp iyo Facebook ayaa horeyba loogu qeybiyay dadka isticmaala, waa betas-ka ugu horreeya
Isku xirnaanta wicitaanada ay iOS marwalba ina siiso waa mid ka mid ah dhinacyada ugu xun ee barnaamijkan, is-dhexgal u ekaan kara sidan
Movistar + waa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto isticmaaleyaal oo aad duubto waxyaabaha ku jira
Movistar wuxuu leeyahay dalabka maqalka ee ugu weyn ee aan hada ku heli karno Spain, waana inay isku keento waxyaabaha ugu fiican ...
Tani waa sida aad si fudud ugu raaxeysan karto cusbooneysiinta iOS 13 OTA oo leh boggaaga la soo dejiyey.
Waxaan ku tusineynaa isbeddelada ugu muhiimsan ee soo gaaray CarPlay cusub ee la imaan doona macruufka 13: Khariidadaha, Muusikada iyo Podcasts oo gebi ahaanba la cusbooneysiiyey
Kaamirooyinka amniga labaad ee Nest ayaa wali heli kara kuwii asal ahaan iibsaday.
Shixnadaha taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacaya adduunka oo dhan sida ku xusan warbixinta Isbeddellada Internetka ee Mary Meeker
Hooyo maamusha inay badbaadiso nolosha gabadheeda mahadnaqa hawsha Raadinta Saaxiibbaday
Thanks to muuqaalka Raadinta Saaxiibadayda, Macy, oo ah gabar 17-sano jir ah ayaa waxaa u suuragashay inay waalidkeed helaan oo ay badbaadiyaan nolosheeda.
Apple waxay hadda diyaar u tahay horumariyeyaasha (oo xiiso leh) beta 2 ee iOS 13 iyo beta ...
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee barnaamijka iMovie ee loogu talagalay macruufka waxay ku dareysaa saameynta shaashadda cagaaran ee aan ku saari karno asalka fiidiyowyada la duubay ka hor shaashadda cagaaran ama buluug ah
iPadOS waxay keeni kartaa Siri caqli badan
iPadOS, nidaamka gaarka ah ee iPad-ka iyo inbadan oo lafilayo- ayaa horeyba nooga dhexjiray, uguyaraan habka ...
Apple ayaa ku qoslaysa Rob McElhenney filimka cusub ee Apple TV + majaajillada Mythic Quest
Wiilasha Cupertino waxay sii daayaan filimka cusub ee 'Mythic Quest trailer' ee TV-ga Apple + xushmeynta had iyo jeer Sunny star Rob McElhenney.
IOS 12.3.2 hadda waa la heli karaa si loo saxo dhibaatooyinka qaabka sawirka ee iPhone 8 Plus
Toddobaadkii hore, ragga ka socda Cupertino waxay si rasmi ah u soo bandhigeen waxa uu noqon doono nooca cusub ee iOS, gaar ahaan lambarka ...
Soo dejiso waraaqaha rasmiga ah ee iOS 13
In Actualidad iPhone waxaan go'aansanay inaan sameyno iskudubaridyada waraaqaha rasmiga ah ee iOS 13, si aad ugala soo bixi karto gabi ahaanba bilaash.
Waxaan tijaabinay Satechi HUB iyo USB-C Cable oo loogu talagalay iPad Pro
Waxaan tijaabinay Satechi HUB iyo fiilada USB-C ee loogu talagalay iPad Pro, ku dhowaad waa inuu lahaadaa qalab loogu talagalay isticmaale kasta oo kiniin ah Apple ah.
Sida loo isticmaalo jiirka ipadka
Apple ayaa ugu dambeyntii go'aansatay inay siiso ikhtiyaarka ah isticmaalka jiirka ipad-ka, wax ay adeegsadayaal badani sheeganayeen muddo dheer. Waan sharaxeynaa sida
3D Touch ayaa wax laga badalay iOS 13, hada wuxuu ku shaqeeyaa softiweer
3D Touch waa mid ka mid ah shaqooyinka taleefannada shirkadda Cupertino ee aad u aragto inaan loo baahnayn illaa ...
Sida loo rakibo beta-ka iOS 13-ka iPhone-kaaga
Actualidad iPhone waxaan had iyo jeer kuugu keenaynaa wadarta guud iyo tan maanta waxaan ku baraynaa sida loo rakibo qalabka 'iOS 13 beta' si deg deg ah oo fudud.
Soo bandhigida nooca xiga ee iOS, iOS 13, dhowr ayaa ah aaladaha laga tagay, labada iPhone iyo iPad.
Apple waxaa laga dhagaysan doonaa EU markay tahay kiiska Spotify. Saabuunta opera-ka ayaa sii noolaaneysa sidii hore welina macluumaad dheeraad ah ayaa looga baahan yahay Midowga Yurub
Ku raaxayso dhammaan muusikada Amazon Music 30 maalmood oo bilaash ah
Amazon waxay bixisaa dhiirrigelin 30 maalmood ah oo bilaash ah si ay ugu raaxaystaan ​​adeegga muusikada ee Amazon Music Unlimited. Waxaan kuu sheegeynaa sida looga faa'iideysto dalabkan!
Iibinta dharka la iibsan karo rubuca hore ee 2019 ayaa kordhay 55%
Iibinta dharka la gashado ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya, laakiin maahan oo kaliya Apple, laakiin sidoo kale soo saarayaasha darteed.
Apple wuxuu abuuraa nidaam lagu xannibo aaladaha ka baxa dukaan isagoon iibsan
Dukaammada Apple weligoodba waxay lahaayeen hal shay oo iyaga ka dhigay kuwo astaamo leh, badeecooyinka ayaa la soo bandhigaa si ...
UAG Firfircoon, waa xargaha ugu xun ee loogu talagalay Apple Watch-kaaga
Waxaan ka tijaabinay suumanka cusub ee firfircoon ee ka socda UAG, anaga oo leh bilicsanaan aad u xoog badan oo geesinimo leh, waxay kuu balan qaadayaan inay iska caabin doonaan waxqabad kasta oo aad sameyso
Shaashadaha shaashadda cusub ee xaday waxay muujinayaan qaabka mugdiga ee iOS 13
Shaashadahan cusub waxay muujinayaan waxa noqon kara habka mugdiga ee iOS 13 oo aan si rasmi ah ugu arki doonno Apple's WWDC 2019.
BookBook for iPad Pro, kiiska ugu caansan sidoo kale wuxuu noqdaa mid shaqeynaya
Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah kiisaska ugu caansan suuqa. Twelve South waxay cusbooneysiineysaa kiiskeeda buugaagta buugaagta si ay ugu haboonaato iPad Pro-ka cusub ugana faa'iideystaan.
Fikrad kale oo ku saabsan iOS 13 taas oo iPad-ku uu yahay jilaa
Fikrad cusub oo ku saabsan iOS 13 taas oo aan ku arki karno in naqshadeeye uu diiradda saarayo iPad-ka. Waxaan arki doonaa waxa ka dhaca WWDC bisha Juun 3
Sida loo arko inta damaanad ah ee aan ka tagay iPhone-ka
Dammaanadda, muranka weligiis ah. Marka hore waxaan xasuusinaynaa in dhammaan aaladaha mobilada lagu iibiyo Ururka Shaqaalaha ...
Tesla ayaa diiday dalab iibsi oo ka yimid Apple sanadkii 2013
Apple waxay rabtay inay iibsato Tesla sanadkii 2013 waana iska cadahay in hawlgalku uusan xirmin. Hadda xogta qaar way dhaaftay, in yar laakiin ku filan si loo arko inay dhab ahayd
Saddex bilood oo xadidan oo loo maro diidmada Google ee shirkadda Huawei
Xukuumadda Donald Trump waxay u soo bandhigeysaa shirkadda Huawei fasax saddex bilood ah. Qiyaas dhadhankeedu yar yahay laakiin isu soo dhawayn kara qaybaha
IPhone-ka ayaa kor ugu kici karaya qiimaha 2019, iyo wax badan
Dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sababi kara in alaabada cusub ee Apple ay la kulanto qiimo koror
Spotify waxay soo bandhigeysaa qalabkeeda gawaarida, "Waxyaabaha Gawaarida"
Shirkadda Spotify ayaa hadda boggeeda ku shaacisay qalab cusub, "Car Thing" ama "Wax loogu talagalay gaariga." Qalab ...
Goorma ayuu 5G imaan doonaa iPhone ka dib furitaanka Intel?
Dhibaatooyin ba'an oo shirkadda Cupertino ah, ka dib markii ay isku dhaceen Qualcomm oo dhowaan la xaliyay, ayaa ku soo biiray ...
Badhanka guriga ee TV-ga Apple TV wuxuu hadda ku geynayaa barnaamijka Apple TV, laakiin waad iska joojin kartaa
Cusbooneysiinta iOS 12.3 ayaa timid oo ay sidoo kale la socoto cusbooneysiinta tvOS 12.3 oo leh ...
Apple waxay ku dareysaa suurtagalnimada in lala xiriiro khabiir ku jira barnaamijkeeda Taageerada
Big Apple wuxuu cusbooneysiiyay barnaamijkiisa Taageerada isagoo ku daray suurtagalnimada inuu la hadlo khabiir, laakiin kaliya Mareykanka.
Titanium Apple Cards oo ku jira gacanta qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda
Kaadhadhkii ugu horreeyay ee Apple ayaa horeyba ugu jira gacanta qaar ka mid ah shaqaalaha Apple. Xaaladdan oo kale Ben Geskin ayaa ina tusaya midkood
Koogeek wuxuu horey u leeyahay xirfaddiisa Alexa ee Isbaanishka, tani waa sida ay u rakibto
Koogeek waxaa hadda loo heli karaa sidii xirfad Isbaanish ah oo loogu talagalay Alexa, oo hadda waad ku xakameyn kartaa qalabkeeda qalabka ku hadla Amazon.
Ku soo dejiso MacX MediaTrans bilaash oo ku guuleysto iPhone XR
Sida loo soo dejisto MacX MediaTrans si bilaash ah ugana qayb qaado bakhtiga loogu talagalay iPhone XR iyo laba Apple Watch Series 4 Kirismaskan.
TicPods Bilaash: midab leh, xakameyn taabasho iyo dhawaq wanaagsan
Tan iyo markii ay Apple go'aansatay in ay ka saarto daaqada dhagaha, headphones-ka Bluetooth ayaa hareeyay jidadka iyo guryaha ...
Apple waxay u oggolaan doontaa hadiyado ku-soo-iibsiga barnaamijka ee barnaamijyada / ciyaaraha
Dhawaan, sida aan ka aqrin karno bogga horumarinta ee Apple, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa u oggolaan doonta hadiyadda iibsashada barnaamijka ee dhinacyada saddexaad.
Sonos Beam - Soundbar, AirPlay 2, iyo Alexa oo ku jira Hal Qalab
Waxaan falanqeyneynaa Sonos Buna soundbar oo sidoo kale ah AirPlay 2 ku hadla ku hadla iyo afhayeenka caqliga leh ee leh Amazon Alexa
Koogeek wuxuu ku siiyaa Amazon muddo xaddidan
Waxyaabaha cusub ee Koogeek ee ku saabsan Caafimaadka iyo alaabooyinka iswada jaanqaadka ah ee HomeKit Waxyaabaha otomatiga ku shaqeynaya waxay ku ansaxsan yihiin waqti kooban Amazon
Catalyst wuxuu ku bilaabayaa kiiskiisa biyuhu biyuhu galaan ee AirPods websaydhka Apple
Darkroom wuxuu gaarayaa nooca 4.0 oo hadda wuxuu ku habboon yahay iPad-ka
Barnaamijka naqshada sawirada ee Darkroom ayaa hada helay casriyeyn cusub oo ugu dambeyn ka dhigaysa mid la jaanqaadi karta iPad-ka
Soo ogow sida loo isticmaalo qaar ka mid ah shaqooyinka Apple Watch Series 4 cusub ee leh fiidiyowyadan 'Apple'
Ragga ka socda Cupertino waxay ku soo noqdeen casharro fiidiyoow cusub oo na baraya sida loo isticmaalo shaqooyinka cusub ee Apple Watch Series 4 cusub.
IPad-ka 2018 ee horeyba loogu heli jiray qaybta dib loogu soo celiyay Spain
Waxay ka codsadeen Apple inay Pamplona dib ugu celiso Qariiradooda halkii laga isticmaali lahaa Iruña
In kabadan 1000 saxiix oo kayar 24 saacadood ayaa loo aruuriyay Apple si loogu dhigo Pamplona meeshii Iruña mar labaad codsigeeda Qariiradaha iyo Cimilada.
Apple Music hadda waxaa laga heli karaa Amazon Echo
Apple Music waxay bilaabmaysaa inay u muuqato adeeg muusig oo laga heli karo Amazon Echo, waxaan hadda u isticmaali karnaa Alexa si aan u dhagaysto muusikada adeegga Apple.
Masar waxay ku andacooneysaa in Apple ay jabineyso sharciyada tartanka waxayna siisay 60 maalmood inay ku saxaan
Maamulka tartanka ee Masar ayaa Apple siiyay 60 maalmood si ay isugu dayaan inay yareeyaan qiimaha boosteejooyinka dalka iyagoo xorriyad dheeraad ah siinaya qeybiyeyaasha gobolka.
Ku raaxayso maqaarkaaga Apple Watch adoo adeegsanaya xargaha Nomad
Waxaan tijaabinay xarkaha Nomad ee maqaarka ee Apple Watch, oo lagu sameeyay agab qiimo sare leh, waa qalab hagaajinaya saacadeena
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 12.1.2 iyo tvOS 12.1.2 hadda waa la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 12.1.2 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo, sidoo kale waa beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 12.1.2 iyo macOS 10.14.3
Gacan-gashiyada cusub ee Mujjo waxay isku daraan teknolojiyadda dharka ugu fiican iyo naqshad aad u wanaagsan si aad ugu isticmaali karto iPhone-kaaga adigoon qabowga gacmahaaga ku qabsan.
Waxyaabaha casriga ah ee Xiaomi waxay la jaan qaadi doonaan HomeKit, maxay tani uga dhigan tahay?
Hadda Xiaomi waxay soo saari doontaa laydh caqli-gal ah oo HomeKit la jaan qaada oo tani wax walba way beddeli kartaa, maxay ka dhigan tahay isbahaysigan cusub
Mophie Powerstation Wireless, 6.040mAh Lacag Bixin La'aan
Mophie Powerstation Wireless wireless wuxuu na siinayaa 6.040mAh dheeri ah oo leh suurtagalnimada adeegsiga lacag bixinta wireless.
Koogeek wuxuu ku iibiyaa Qalabka HomeKit
Koogeek wuxuu na siiyaa dalabyo cusub oo ku saabsan alaabooyinka la jaan qaadi kara HomeKit qiimo aad u xiiso badan isla markaana ku xaddidan waqtiga
Ma rabtaa inaad ogaato inta daqiiqo ee aad dhageysatey Spotify sanadkan?
Mashruuca sanadlaha ah ayaa hadda la heli karaa halkaas oo aan kala tashan karno dhammaan howlahayaga laga fuliyay Spotify illaa 2018 oo dhan.
Richard Gere wuxuu noqon karaa halyeeyga taxanaha xiga ee Apple
Richard Gere wuxuu ka mid yahay musharixiinta jilaya riwaayadda soo socota ee Apple ay ku dalbaneyso adeegga fiidiyowga ee socda.
Diirka ayaa ka ilaaliya iPhone-kaaga adigoon si dhib leh u dareemin
Waxaan falanqeynaa kiisaska diirka iyo shaashadda shaashadda isla sumaddaas, habka ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo iPhone-kaaga iyada oo aan la dareemin.
IPhone XR wuxuu leeyahay kaamirada hal-gashiga ugu fiican ee suuqa ku jirta, sida laga soo xigtay DxOMark
Sida laga soo xigtay DoXMark, iPhone XR wuxuu leeyahay kamaradda ugu fiican aaladda hal muraayadaha indhaha ah, isagoo garaacaya xitaa Google Pixel 2.
LIFX Beam, nidaam iftiin la yaab leh
Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah nidaamyada nalalka ee ugu horumarsan ee aan ku rakibi karno guriga, ku habboon HomeKit iyo xulashooyin kaa yaabin doona.
Logitech Slim Folio, maxaa yeelay kaliya iPad Pro uma qalmo kumbuyuutar
Waxaan tijaabinay Koodhka Keyboard ee Logitech Slim Folio, oo ah qalab lagama maarmaan u ah kuwa doonaya inay u isticmaalaan iPad-kooda wax ka badan uun daalacashada ama daawashada waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Siri wuxuu ku burburayaa Tilmaamaha ka dib cusbooneysiinta iOS 12.1.1
Tilmaamo App Gawaarida leh Siri Kadib Cusboonaysiinta 12.1.1
Haddii aad lacag hayso waxaad geli kartaa xaraashka joornaalkii ugu horreeyay ee Macworld ee ay saxiixdo Jobs
Haddii aad lacag hayso waxaad geli kartaa xaraashka joornaalka Macworld ee ay saxiixdo Jobs
Apple wuxuu sii daayaa WatchOS 5.1.2 Iyadoo ECG Function Hada Laheli Karo
Sanado badan, waxaan kahadleynay suurtagalnimada in Apple Watch ay isku dhafan tahay qalabka korontada, fikrad ...
Yi 4K + Dib u Eegista Kaamirada
Waxaan falanqeyneynaa kamaradda waxqabadka ee 4K + 4K, oo awood u leh duubista 60K illaa XNUMXfps, oo leh astaamo qiimo leh qiimo ku jira.
Nooca ugu dambeeya ee iOS 12.1.1 ayaa hadda la heli karaa. Kuwani waa warka
Apple ayaa hadda soo saartay cusbooneysiintii ugu horreysay ee loogu talagalay iOS 12.1, oo ah cusbooneysiin diiradda saareysa hagaajinta qaar ka mid ah astaamaha la yimid iOS 12.1.
HomeKit La jaan qaadi kara iHaper Light Strip LED Review
Waxaan falanqeyneynaa LED iHaper Light Strip, oo ku habboon HomeKit iyo qiimo aad u xiiso badan oo aan ku dari karno ururintayada.
Tani waa sida HomePod kuugu maqlo xitaa iyadoo la maqlayo dhawaaqa sooyaalka ah
Kooxda injineernimada codka iyo Siri waxay sharraxeen sida Siri noogu maqli karo HomePod xitaa iyadoo buuq badani ka jiro.
Outcast loogu talagalay Apple Watch ayaa hadda noo oggolaaneysa inaan marinno cutubyada podcast-ka
Nooca loogu talagalay Apple Watch ee Outcast ayaa hadda la cusbooneysiiyay oo noo oggolaanaya inaan si toos ah u galno cutubyada boodhadhka aan dhegeysanno.
Koogeek wuxuu ku saabsan yahay Xadgudubka Smart-ka iyo Qalabka Caafimaadka
Waxyaabaha cusub ee laga helo Koogeek oo ay ka mid yihiin fiilooyinka xoogga badan, fiilada cadaadiska dhiigga ee dhijitaalka ah iyo koronto-dhaliyaha.
PowerPic, xeedho u qalma in la dejiyo
Waxaan tijaabinay laba iyo tobanka koonfureed ee xeedho wireless ah, PowerPic, kaas oo isku daraya qaab sawir iyo xeedho hal qalab ah.
Apple wuxuu kordhiyay mudada soo celinta Apple Watch
Ololaha lagu shaacinayo astaamaha Apple Watch Series 4 cusub, isla markaana lagu kordhiyay muddada soo noqoshada illaa 45 maalmood.